Dhaamassa isaa Gagababdu Qeerroo Oromoof
Guyyaa Ifaanoo/Masqala Oromoo
Masqalli aadaa Oromoo ta'uu fi kiristaanummaan akka wal hin qabanne, ragaaleen qorannoo ni agarsiisu!.Haa ta'u malee,erga gaafa Ilmi Liiban Maccaa Habte Giyoorgis Diinagdee (Quseen) addeessaa Muree birbirsa Gooroo tti Masqala habashoota kabachiisee qabee,Masqalli aadaa Amaaraa fi Oromoo ta'uun bakka lamatti ba'e!
Egaa seenaa fi Masqalli aadaa Oromoo, Taaboreen aadaa Oromoo ta'uuf ragaaleefi afoolli Oromoo har'a ga'e ni agarsiisa!
Kanaaf Yaadota armaan oliin kana irratti akka marii'atnu isinii dhaama
* Inni jalqabaa waa'ee Masqala Oromoo Hanga beektu barreessi
* Oromoon Tuulamaa yeroo kam guba?
* Oromoon Sikkoo Mandoo yeroo kam Masqala Oromoo kana guba?
* Ilmaan Arfan Qalloo akkamitti beekuu?
* Oromoo Maccaa keessa aadaa masqala/Ifaanoo Oromoo jiru kana Taaboree Guduruu, Taaboree Leeqaa/Jimmaa akkamitti dhaha Oromoo Maccaa wajjin deema?
Ifaanoon/Masqalli Maccaa fi Tuulama biratti sirbaa fi gammachuu guddaan waan kabajamuuf, sirboota Masqalaa hangam yaadatta?
Aadaan Oromoo Kun Sadarkaa biyyoolessaatti akka beekamuu fi kabajamuuf, dhiibbaa barbaachisu akka taasifnu, Oromoonni Matakkal Wambaraa aadaa kana hanga har'aa qabatanii waan jiraniif, ibsituu eenyummaa isaaniis taasifnee ilaaluu akka dandeenyu! Guyyaan kun akkaataa lakkoofsi garanfasaa dagatamaa jiruun wallaalamuuf waan jiruuf, #IfaanooMasqalaOromoo kana miidiyaan wayyaanee waan hin kabajneef jaarsolii Guulaa fi raagaan irratti hirmaachisuun #OMN akka uummata wajjin aadaa kana kabajee beeksisu tumsa barbaadamu akka waliin baanu! Deebisaa Gadaa Maccaatiin
Wayyane hidan buqiifne malee sabi Oromoo akka sabati jirachuu hin danda'uu, kanaafuu Oromoon bakka jiruu TPLF irrati tokkuman ka'uu qaba.
Akkuma beekamu rakkoolee godinoota Oromiyaa tokko tokko keessatti maaliif FXGn laafe kan jedhu gaafachuun keenya ni yaadatama!
Haala hundumaarraa adeemsa wayyaaneen ittiin uummata keenya burjaajessaa jirtu tokko yeroo dhageenyu, irratti barreessuuf dirqamnee jirra!
Godinoota hedduu keessatti Mootummaan Wayyaanee hattoota bobbaasuun magaalota keessatti saamichi jabaan geggeeffamaa jira!
Baadiyyaalee yeroo amma kana loowwaan saamamuun uummati keenya harka qullaa hafaa jira!
Gochi kun wayyaaneendhan kashalabbooti ijaaramanii uummata keenyatti waan bobbaafamaniif, uummata abdii kutachiisuufi!
Yeroo uummati mormii agarsiisu saamtota uummata saamsisuun, ABO keessantu isin saamsisa jechuun uummati akka abdii kutatu gochuun bakka nuti hin jirre tti nageenya hin argattan jechuun yaaddoo Uummatatti naqanii umurii bittaa dheereffachuuf waan ta'eef, qeerroon bakka jirrutti uummata keenya diinaan saamamaa yoona ga'e boochisuun diinarra adda nun taasisu! Kanaafuu uummati keenya bakka jirutti nageenya walii eeguun wayyaaneen bakka hin jirre tti wal jiraachisuu akka danda'u haa mirkaneessinu!
Namoota rakkina qaban walii wal gargaarre, hiriyoota keenya gorsuun nagaa uummata keenyaa mirkaneessuun wayyaanee haa kuffisnu! Deebisaa Gadaa Maccaatiin
Kun dhugaadha garuu nuti harka qullaa waan taaneef dhumaa jirra jarri kanaaf nun sodaattu! Guyyaa kaleessaa qeerroo hedduun finfinnee tti wal geenyee marii hidhannoo taasifneerra Akka nuti jenneeti akkasumaan uummata abdii kutachiisuurra qawwee dhaan itti Seenuu qabna rakkoon nu qabnu diyaaspooraan qawwee hidjachiisuuf homaa deeggarsa taasisu dhabuu dha Isin yoo dandeessan gofundme irratti uummata mara gaafachuu dha Hiriira illee akkuma itti fufuuf qindeessarra jirra
Yaadannoo Awaash ……………….kutaa 2ffaa
Noolee Buttaatiin Leenjii Wayyaanee Awaash Kabajamoo dubbiftoota yaadannoo Awaash! Kutaa jalqabaa keessatti haala hiriira mormii magaalaa Finfinnee keessaa fi dararaa mootummaa wayyaanee kan himamee hin dhumnerraa yaaddoo fi sodaan keessa keenyatti haa biqiluuf utuu hin taane,jabina fi tokkummaa dhugaa qabaannee qaanii fi tuffatama akkasumas salphin nurra ga’aa jiru keessaa ba’uuf jabaannee roorroo alagaa kana of irraa fonqolchuuf akka ta’uuf isinii barreessa. Daannoon Waraanaa Wayyaanee kabajaa namummaa dhala namaaf hin qabne,Shamarraniifi Haawwan keenya salphisuun gocha shororkeessaa nurratti nurratti raawwate!
Akkuman kutaa jalqabaa irratti isinii eere,reebicha fi aspaaltii gubaa irra nu dhaabaa,bishaan qaama namaaf hin taane nu obaasaa,laaqii roobaan guyyaa hiriira mormii Finfinneetti keessa teessifamnee oollee bulle utuu hin miiccatin,guyyooti sun kan dhuman yeroo ta’u,marti keenyayyuu dafqii fi namummaan keenya jireenya gammoojjii sanaa damdamachuu dadhabnee afuurri fi dafqi keenya yoo walitti ba’ellee kan saalfatu hin jiru! Waan mararra ga’aa jiru waan ta’eef! Egaa wayyaaneen reebichaa fi dararaa booda LEENJII jettee kutaa keessatti walitti nu qabdi! Taa’umsi ka’ee barcumni walitti qabamee lafa teenya barcumaa/teessuma irra ta’uun akka waan warra gumaatti wal ilaalla! Ilaalcha leenjii wayyaanee gara jalqabaa walii galatti Kutaa ani itti leenji’u keessatti hiriyoota keenya wajjin erga geeffamnee, lafa teteenyee booda Komaandar Gideey fi kan Godina Horro Guduruu Walaggaatti dhalatee afaan Oromoo beeku, haatikoo Oromoodha jedhu nama maqaa isaa yeroo warri kaan waaman hin dhagayin lamatu dhufee ol seene!
Afaan Amaaraa malee afaan Oromoo haasawuu hin dandeessan jedhan inni afaan Oromoo dubbatu sun “mee namni Horro Guduruu Saqalaadhaa dhufe?” jedhee gaafate.Itti fufee utuu barnootichatti hin galin,barnoota lammummaaf amala gaarii barachaa turtan garuu hubannoo isinii dabaluuf waa’ee Heera fi seeraa haala gabaabaa ta’een ilaalla jedhe. Komaanderichi kun itti fufuun Seenaa Heera biyyattii Hayile Sillaasee qabee hanga ammaa jiru odeessee xumuree. Achii booda,Komaandarichi inni Tigiree ka’ee “ኢናንተ የኦሮምኛ ተናጋሪዎች ህዝቦች…”jedhee itti fufe hiiknisaa isin dubbattoonni Afaan Oromoo” yeroo jedhu Uummata Oromoo miti Oromoon garbomfatee afaan barsiise fi ilaalcha biyyoolessummaa Oromoo diiguuf jecha murni TPLF itti dhimma ba’uufi paartileen Saba Amaaraa kan akka Ginbot7 itti gargaaramanidha! “ኦሮምኛ ተናጋሪዉ ህዝብ” Ummata afaan Oromoo dubbatu” jedhu malee uummata Oromoo jedhanii hin waamani Seenaa biyya kanaa keessatti akka beeknuttii fi dhimmi hordoftoota Amantaa Musliimaa biyya kana keessatti gaaffi dhiyeessaa turanii fi jiran keessaa bara Mootummaa Hayila Sillaasee “እትዮጵያ ዉስጥ የምኖሩ ኢስላሞች” Islaamota Toophiyaa keessa jiraatan” jedhanii waamuun Impaayera Xoophiyaa kana keessa Hordoftoonni Amantaa Islaamaa/Musliimonni/ lammii impaayera biyyattii ta’uun isaanii hafee akka nama biyya biraa dhufeetti ilaalaa turuun isaanii ni yaadatama!
Har’as ilaalchi kun itti fufuun, “Uummata Afaan Oromoo dubbatu” jedhanii waamuun kabajaa uummata kanaaf dhabuufi Oromoon hin jiru jechuu akka ta’es ifadha! Jechi Komaandara Wayyaanee kanaa utuu ol nutuquuf jedhuu guyyaa itti aanu keessatti akkas jedhe “ Isin iyyuu walii galtee hin qabdani, Wallaggaa, Shawaa, Gujii fi Boorana” jettanii wal qooddu jechuun bakka isaan hin jirretti biyyattiin tasgabbii akka hin qabne,Addi bilisummaa Oromoo paartii Oromoo Taanzaaniyaa,Keenyaa,Somaaliyaa,Goojjam,Raayyaa fi bakka jiranii walitti qabee biyya guddittii Gaanfa Afirkaa keessattin ijaara jedhudha jechuun “kun immoo nagaa gaafa Afirkaa booressa” jedhan hidhamtoonnis “ Kan maqaa naga eegumsaan Biyyoota Ollaa saamurra kan biyya ofii ijaarratu kabaja qaba” jechuun salphisan! Dhimma Fincila Oromoo fi Amaaraa Gondor ilaalchisees, kan Oromoo irra fooyyee akka qabuufi qabsoon Amaaraa daguuggaa Sanyii irratti akka hundaa’e fi Tigiree kan balleessudha jechuun irra deddeebin dubbatan!
As irratti wayyaaneen akka yaaddutti,kan mirga isaaf waraana ishee ajjeesu fi abbaabiyyummaa isaaf falmatu kamuu,maqaa balleessuufi humnoota walitti dhufuuf yaadan immoo isa tokko fira fakkeeffachuun haxxummaa isaan ilmaan Oromoo keessa bulchuuf jedhanidha! Leenjii Guyyaa Arfaffaa irratti waa’een Moggaasa Mootummaa Federaalaa FI Rippabulika Xoophiyaa,Olaantummaa Heeraa,Waa’een Mirga Namoomaa jedhu baratamee dhimmi Afaan Hojii Federaalaa dhiyaate isarrattis leenjiftoonni Oromoon afaan isaa saba biraa irrati akka fe’uuf deemutti kaasan.Hidhamtoonni garuu Oftuulummaa mootummaa wayyaaneeti malee Oromoon Afaan isaa saba biraa irratti fe’uuf hin deemu, fakkeenyaaf afaan hojii Afirkaa kibbaatti 11dha biyya kanatti afaan tokko malee sanuu qaanii malee Oromiyaa keessatti Afaan Amaaraa babal’isuun furmaata jettuu? Jechuun jibbiinsa wayyaaneef qaban ibsaan.
Hidhamtoonni guyyaa kana fincillee aspaaltii gubbaatti baafamnee affeelamne kun ta’uu kan danda’eefis dhimma magaalota Finfinnee dirredawaafi Aawwaday irratti gaaffi dhiyeessinerraati Wayyaaneen dhimma magaalotaa fi afaanii wayita kaafte hidhamtoota keessaa tokko yaada gaafatamee akkas jedhe “ Daandiin itti Fifinnee keessaa hanga har’aa Oromoo dhiittan afaan hojii magaalichaa Afaan Amaaraa yeroo ta’u,kan naannoo Oromiyaa immoo afaan Oromooti Finfinnee handhuura isaa keessatti afaan isaa afaan hojii ta’uu dhabuurraa kan ka’e, dhalataan naannoolee biroo Fifinnee dhufee hojjetee buluu danda’a.Achuma Finfinnee cinatti dhalatanii kan afaan hojichaa hin beekne immoo hojjechuu hin danda’ani kun daandii itti Oromoo Finfinnee keessaa baasuuf hojjeettanidha.
Yeroo Filannoo uummata Oromoo sobuuf labsiidhaan Teessoon Mootummaa Naannoo Oromiyaallee Fifinneetti deebi’e jetten malee ammallee Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Caffeen ragga’ee waan hin jirreef, Mootummaan Federaalaa FM Finfinnee kan maqaa Finfinnee jedhuun Adaamaarraa tamsaasullee itti yaadee Oromoo goyyomsuuf mootummaa Naannoo kan akka Looni gara ajajjanitti rukuttanii kurkursitaniin nu sobdu malee faayidaan uummati Uummati Oromoo bulchiinsa keessan irraa argate yoo jiraate hidhaa fi ajjeesamuu akka kanaati kunoo!” jedheeni kanaaf guyyota itti aanu akka leenjicharra hin teeny kutaa biraatti hidhame Lafa Qubannaa barbaadduu? Qaanii kan hin beekne loltoonni fi basaastonni saamtonni Ilmaan Tigiraay Oromoon gara magaalaa Finfinneetti fi magaalota keessatti qaroominaafi ammayyummaa, teknoloojii wajjin jiraachuun dhiibbaa qaba jedhanii waan yaadaniifi “lafa qubannaa barbaadduu? Naannoo gambeellaa fi Uummattoota kibbaa keessa lafti qotamee hin beekne jira isiniif argineerra mootummaan federaalaa akka isin qubachiisu haala isinii mijeessuuf nuti qophiidha!” jedhe Tigireen inni fuula muraa tokko dhufee!
Yaa Ilmaan Oromoo dhuguma namni waan ofii hin qabne namaa kennuuf yaadu addunyaa kanarra jiraa yoo jettan mootummaa fi ilmaan isaa bofa ta’antu kana jedha tokko mootummaa ofiifuu homaa hi qabnetu kana jedha inni biraan kan isinii kennina jedhan handhuura irra teessanii fincila nutti hin kaasinaa akkuma bara Minilik ilmaan Oromoo Tuulamaa fi Warri Oboo Finfinneerraa buqqaasamuun, Godinoota Arsii, Kafaa, Wallagga, IluuAbbaabooraa fi Jimmaatti tamsaasaman, har’as lafa gammoojjii itti isin erginu qabna jechuun waan afaan Ekeraa Minilik nutti dubbachaa jiru natti fakkaatee ture!
Gama biraatiin, warri TPLF biyyaa fi naannoo isaani keessa isin qubachifna jedhan utuu hin taane, Naannoo Gambeellaa fi Kibbaatiini jedhan kun immoo naannoon sun akka hin barannetti yaaduu,saamaa akka jiraniifi konteraakteroonni abbootii qabeenyaa jechuun kan naannolee kana keessaa waan jiru saamaa jiru isaan waan ta’eef,dheebuu biyya namaa saamuuf qabaniifi bor uummati isaan har’a saamaa jiran yoo itti dammaqe Oromoodhaan walitti diranii isaantu lafa keessan qabate jechuufii ofii isaanii immoo gaaffii tokko malee Finfinneefi waan naannoo Finfinnee jirtu saamuuf lafa qubannaa barbaadduu? Jette ofii kan lafa qubattu hin qabne! Kabajamtootaa! Yaadannoo Awaash ilaalchisee leenjii wayyaanee kan poolisiiwwaan misoomaa jettee munaagaa turte kutaa sadaffaa fi isa xumuraatiin walitti deebina!
Noolee Buttaa Gadaa Finfinneerraa